“Erling Håland wuxuu gaari karaa heerka Ronaldo” – Rivaldo – Gool FM
(Yurub) 22 Maajo 2020. Halyeyga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Rivaldo ayaa sheegay in weeraryahanka naadiga Borussia Dortmund ee Erling Håland uu gaari karo heerka de Lima Ronaldo, isagoo dhinaca kale tilmaamay inuu bandhig fiican sameyn doono marka uu u dhaqaaqo inuu ka ciyaaro horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Magaca Erling Håland uu oo 19 jir ah ayaa lala xiriirinayaa inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta Real Madrid, kaddib qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee xilli ciyaareedkan.
Håland ayaa bishii Janaayo ee sannadkan u dhaqaaqay kooxda Borussia Dortmund, kaddib markii uu kaga soo biiray naadiga Salzburg, wuxuuna ilaa iyo haatan ka soo muuqday safka kooxda reer Germany 12 kulan, isagoo ku guuleystay inuu dhaliyo 13 gool.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada caalamiga ah ee “Goal” halyeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Run ahaantii isaga waa ciyaaryahan cajiib ah, waa 19 jir, in badan ayuuna sii fiicnaan karaa, wuuna noqon karaa mid ka mid ah weeraryahanada adduunka ugu fiican”.
“Wuxuu leeyahay shaqsiyad badan, wuxuu ciyaaraa cabsi la’aan, waxaana ka muuqata deganaansho dhanka garoonka ah, sidaas darteed waa ciyaaryahan heer caalami ah, laakiin wali wax badan ayuu sii baran karaa, waana wax iska caadi ah in kooxo badan ay la socdaan isaga”.
“Dadka qaar ayaa durba is bar-bardhigaya in qaabka uu u ciyaaro Håland uu la mid yahay sida de Lima Ronaldo, waxaa laga yaabaa inuu jiro waxyaabo ay isku mid ka yihiin, sababtoo ah waa xiddig dhaqsi badan, mana baqo, wuxuuna dhaliyaa goolal badan, laakiin waa xilli hore in laga fekero inuu noqon doono badelka Ronaldo”.
“Waxaan u baahanahay waqti si aan u aragno haddii Håland uu gaari karo heerka Ronaldo, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay tayo ku kalifi karta inuu gaaro heerka de Lima Ronaldo”.
“Waxay u muuqataa in Real Madrid ay noqon doonto halka ugu wanaagsan uu Håland ku biiri karo xagaaga, waxaana u maleynayaa inuu ku fiicnaan doono horyaalka Spain, sidoo kale wuxuu noqon karaa dooq wanaagsan kooxda Barcelona”.